ဆရာဝန်လေးနဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုးမိန်းမလှလေးရဲ့ အချစ်ပုံပြင်လေးကို တွဲဖက်ဖန်တီးထားတဲ့ Win နဲ့ Min
By News BarPosted on December 30, 2021 January 14, 2022
၂၀၂၂ ထဲမှာ ပြသသွားမယ့် GMMTV ရဲ့ အဟော့ဆုံးဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာဆိုရင် အလွတ်တမ်းထိပ်တန်းမင်းသမီးချော Min Pechaya နဲ့ နာမည်ကျော် BL မင်းသား Win Metawin တို့ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် တွဲဖက်မှုဇာတ်လမ်းသစ်ကလည်း အပါအဝင်ပါပဲ။ “Devil Sister” ဇာတ်လမ်းကို လူအများစိတ်ဝင်စားနေရတဲ့အကြောင်းကတော့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လွန်းတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းလေးကြောင့်လို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။
ဇာတ်ညွှန်းအမြည်းလေးကို ပြောရရင်တော့… မိန်းမလှလေးတွေဆိုရင် အန္တရာယ်များလှတဲ့ ပန်းရိုင်းလေးတွေလိုပါပဲ။ စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်တတ်သလို ခြယ်လှယ်ဗိုလ်ကျတတ်တာ ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်မလေး‌တွေရဲ့ အမူအကျင့်လေး‌တွေပေါ့။ တစ်ခုခုကိုကြိုက်နေရင်တောင် ပါးစပ်ကတော့ မကြိုက်ဘူးလို့ပြောရင်း ဟန်ဆောင်ပန်‌ဆောင်လုပ်လိုက်ရမှ ကျေနပ်တတ်ကြပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုမျိုး ထူးခြားဆိုးသွမ်းတဲ့ အလှပဂေးတွေထဲမှာ Irin (Min Pechaya) ကတော့ “နတ်ဆိုးမ” လို့ အမည်တွင်တဲ့အထိ အဆိုးတကာ့ အဆိုးဆုံး မိန်းမလှလေးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အိမ်နီးချင်းကိုယ်တော်ချော Namcha (Win Metawin) ကတော့ ဒီကောင်မလေးကိုမှ အချစ်ကြီးချစ်မိနေပြန်ပါတော့တယ်။ တိရစ္ဆာန်အထူးကုဆရာဝန်လေးဖြစ်ပြီး ကြင်နာနူးညံ့တတ်တဲ့ Namcha ဟာ ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်မလေးကိုမှ ဘဝကြီးကိုပုံအပ်ရင်း ထိန်းကျောင်းပေးချင်နေပါ‌တယ်။
အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝကတည်းက ချစ်ခဲ့ရတဲ့ အချစ်ဦး Irin ကို ကြီးသည်အထိတိုင်အောင် ခံစားချက်တွေပြောင်းလဲခြင်းမရှိ… စွဲစွဲလန်းလန်းနဲ့ကို ချစ်မိနေရှာသူပါ။ စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်သူ Namcha က Irin ရဲ့ စိတ်နှလုံးသားကို ဖမ်းစားရင်း အချစ်ပန်းကလေးတွေ ဖူးပွင့်လာအောင် ဖန်တီးနိုင်လေမလား? ဒါမှမဟုတ် ဖူးပွင့်ခွင့်တောင်မရဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်ဒဏ်ကြောင့် ပျက်ဆီးသွားလေမလား? Irin ကကော Namcha ရဲ့ အချစ်စွမ်းအင်တွေကြောင့်ပဲ အလိမ္မာတုံးလေးဖြစ်သွားမလား? ဆိုတာကို ကြည်နူးစရာကောင်းအောင် ကြည့်ရမှာပါ။
Win Metawin နဲ့ Min Pechaya တို့ရဲ့ “Devil Sister” ဇာတ်လမ်းသစ်ဟာ ပရိသတ်ပေါင်းများစွာက မျှော်လင့်နေကြရတဲ့ဇာတ်လမ်းသစ်ပါ။ Min Pechaya အနေနဲ့ အလွတ်တန်းမင်းသမီးဖြစ်ပြီးနောက် ပထမဆုံးရိုက်ကူးတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်သလို Win Metawin ကလည်း စီနီယာဝါရင့်မင်းသမီးတစ်ဦးနဲ့ တွဲဖက်ရိုက်ကူးခွင့်ရတာကြောင့် အားလုံးက မျှော်လင့်ချက်အကြီးကြီး ထား, ထားကြပါတယ်။ ပထမဆုံးတွဲဖက်ပေါင်းစည်းမှုကတည်းက Chemistry မိလွန်းနေတဲ့ Win နဲ့ Min ကို ကြည့်ရဖို့ ရင်ခုန်နေပါပြီ။
Posted in Celebrity News, Thai CelebrityTagged Thai Update
Previous post လမ်းပျောက်နေသလိုခံစားနေရတဲ့ လူငယ်အားလုံးအတွက် အကြံပြုအားပေးခဲ့တဲ့ Suga
Next post အချစ်ကို ရှာဖွေခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မျှော်လင့်နေကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ Yang Mi